Jakarta Xalaal Hagaha Socdaalka eHalal Travel Mart
Naaneysta Jakarta ee ka dhexjirta shisheeyaha ayaa ah Xarago weyn, iyo sida midhaha laftiisa, waa wax laga naxo aragtida hore (iyo urta): baraf, uumi, cufnaan culus oo qiyaastii ah 30 milyan oo qof oo lagu soo daadiyay magaalooyin aad u ballaaran. Aagga magaalooyinku waa indha indheyn iyo soo dhalaal dadka reer Indooniisiya, ganacsi ahaan iyo xarun dawladeed, iyo magaalada ugu horumarsan waddanka. Laakiin waxaas oo dhami waxay ku yimaadaan qiimo: magaaladu way dhibtooneysay aad adag tahay in lala socdo koritaanka magaalooyinka. Wadooyinka waa weyn ayaa la buuxiyaa saacadaha ciriiriga iyo dhamaadka wiigga (mararka qaarkood maalinta oo dhan inta lagu jiro xilli roobaadka sababtoo ah wadayaasha mootooyinka oo gabaad ka dhigta duulimaadka ama tunnelka marka roobku da'o, taas oo keeneysa ciriiri dheeraad ah), halka nidaamka gaadiidka dadweynaha uu awoodi kari waayey inuu yareeyo taraafikadaas badan. Guriyeynta dadka ayaa sidoo kale dhibaato ahayd waxayna intaas ku dartay, maskaxda dadka badan ayaa wali ka dhigeyn magaalada meel wanaagsan oo lagu noolaado, sida lagu riyooday.
Intaas oo dhami, markii hore xoogaa xoogaa ah, haddii aad u adkeysan karto wasakhda oo aad awoodi karto inaad ku raaxeysato jilicsanaanta Jakarta, waxaad ogaan kartaa waxa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan, magaalooyinka adduunka ugu nool. Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu sameeyo Jakarta, laga bilaabo jardiinooyinka cagaaran iyo xarumaha taariikhiga ah, dukaamaysiga cosmopolitan, cuntooyinka kala duwan ee loo yaqaan 'Halal'.
Dhismaha gumeysiga ee hadda ah Matxafka Taariikhda Jakarta, ee Galbeedka Jakarta.
Dekadda Sunda Kelapa taariikhdu waxay ahayd qarnigii 12aad, markay u adeegtay boqortooyadii Sundanese ee Pajajaran oo u dhow Bogor-ta maanta. Reer Yurubkii ugu horeeyey ee yimid waxay ahaayeen Boortaqiiskii, oo ay Boqortooyada Hinduuga ee Pakuan Pajajaran ogolaansho ka siisay inay dhisaan godown (bakhaar) 1522. Xakamaynta ayaa wali ku sii jirtay gacmaha maxalliga ah, 1527 magaaladana waxaa qabsaday Amiir Fatahillah, amiir Muslim ah oo reer Cirebon ah, oo magaca u beddelay Jayakarta.
Horraantii qarnigii 17aad, hase yeeshee, Holland Si qurux badan ayey ula wareegeen magaalada dekedda leh, iyo daaqsigii guri tartan Ingiriis ah ku tartamayey 1619 wuxuu xaqiijiyey inay haystaan ​​jasiiradda. Magaca hoostiisa Batavia, magaalada cusub ee Dutch-ka waxay noqotay caasimada Dutch East Indies waxaana loo yaqaanay Boqorada Bariga.
Si kastaba ha noqotee, Nederlandku waxay sameeyeen khalad isku day ah inay ku celiyaan Holland iyagoo qoday kanaallo ku baahsan qulqulatada cudurka duumada ee aagga, taasoo keentay heerar naxdin leh oo aad u sarreeya oo magaaladu ku kasbatay. Qabuuraha Ninka Cad. Horraantii 1800-meeyadii ayaa kanaallo badan la buuxiyay, magaalada waxaa loo beddelay 4 km gudaha iyo Luulka Bariga mar labaad soo ifbaxday.
Sannadkii 1740, addoommadii Shiinaha waxay ku caasiyoobeen Nederland. Jabhadda ayaa si adag hoos loogu dhigay xasuuqii kumanaan addoomo Shiine ah. Kuwa badbaaday waxaa loo masaafuriyey Sri Lanka.
Sannadkii 1795, Holland waxaa ku soo duulay oo qabsaday Faransiis, Maarso 17, 1798-na Jamhuuriyadda Baatavian, oo ah dayax gacmeed Faransiis ah, ayaa la wareegay deymaha iyo hantida VOC. Laakiin Ogosto 26, 1811, safar Ingiriis ah oo uu hogaaminayo Lord Minto ayaa jabiyay ciidamadii Faransiiska / Holland ee Jakarta, taasoo keentay xoreyn kooban iyo maamulkii xigay ee Indooniisiya ee Ingriiska (oo uu hogaaminayay Sir Stamford Raffles ee magacii Singapore) 1811-1816 . 1815, Shirweynihii Vienna kadib, Indooniisiya waxaa Ingiriiskii looga wareejiyey dowladda Holland.
Magaca Jakarta waxaa loo qaatay qaab gaaban oo Jayakarta ah markii magaalada ay qabsadeen Jabaan sanadkii 1942. Dagaalki kadib, dagaalkii Indooniisiya ee xornimada ayaa xigay, iyadoo caasimadana si kooban loogu wareejiyay Yogyakarta kadib markii Holand weerareen. Dagaalku wuxuu socday ilaa 1949, afar sano ka dib Xornimadii Indonesia, markii Nederlandku aqbashay xorriyadda oo ay dib u soo celiyeen magaaladii oo mar labaad noqotay caasimadda Indonesia.
Tan iyo markii xorriyadda la qaatay, dadka ku nool magaalada Jakarta ayaa cirka isku sii shareeray, taas oo ay ugu wacan tahay muhaajiriinta magaalada ka imanaya ee ka imanaya jasiiradaha Indonesia. Dhamaan Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) gobolka caasimada waxaa lagu qiyaasaa inuu ku nool yahay qiyaastii 30 milyan.
Jakarta, sida Indonesia inteeda kale, waxay ku jirtaa kala soocida cimilada kulaylaha. Waxay leedahay laba xilli oo kala duwan, roobab iyo qalalan. Waa kuleyl iyo badiyaa qoyan oo leh isbedbedel yar oo heerkulka sanadka oo dhan. Celceliska heerkulka waa qiyaastii 28 ° C (82 ° F), kulul marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee ku yaal Indonesia, gaar ahaan maqnaanshaha geedaha meelo badan.
Nofeembar illaa Maarso waa xilliga ugu sarreeya ee xilli roobaadka, daadadka iyo khalkhalka taraafikada ee waddooyin badankoodna badanaa way dhacaan. Markii ugu xumeyd, daadadku waxay sababi karaan inay istaagaan meelaha u nugul waxayna qaadataa dhowr maalmood in ay yaraadaan balaadhinta kanaalka iyo nadiifinta ayaa hoos u dhigay saameynta si aad ah iyo inta badan jidadka waaweyn, saacado dhowr ah ayay ku egtahay inta ay qaadaneyso biyaha taagan in la tirtiro. Xitaa xilliyada roobka, qorraxdu badanaa waxay soo muuqataa saacado maalin kasta. Inta lagu guda jiro kala guurka xilliga roobka ama xilliga qalalan ama kan kale (Abriil-Maajo & Sebtember-Oktoobar), waxaa mararka qaar dhaca roob. Mararka qaarkood way shubeysaa; waqtiyo kale maahan dhaqid. Waxa ugu fiican ayaa ah inay qaboojiso hawada ka dib maalin kulul oo kulul. Roobabku had iyo jeer waa maqnaadaan laga bilaabo Juun ilaa Ogosto.
Dhaqanka ragga & dumarka ondel-ondel ee Madxafka Wayang, Jakarta
In kasta oo ay ahayd dheriga dhalaalaya ee Indooniisiya, haddana qabiilka asalka ah ee Jakarta ayaa loogu yeedhay Betawi wali waxay ku faantaa dhaqankeeda. Xaqiiqdii waa iskudarsanaan u gaar ah jinsiyadaha kala duwan ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah laga soo bilaabo Shiinaha ilaa Boortaqiiska, taas oo ka dhigaysa inay ka duwan tahay qaybaha kale ee Indonesia. The Lenong waxqabadka tiyaatarka waxaa weheliya Gambang Kromong koox-kooxeed ka kooban Sundanese Gendang, Javanese Gamelan, iyo Shiinaha Kongahyan (waa nooc ka mid ah violin). The Tanjidor buunka ayaa ah saameyn ka timid Nederlandka, halka Burtuqiiska uu dardaarmay Keroncong kooxda muusikada Sannad-guurada markii la aasaasay magaalada 22-kii Juun kasta, dhaqan dhaqameed u gaar ah ayaa laga arki karaa hudheelkaaga: lamaanaha caanka ah ee Ondel-ondel boombalo. Khibrada buuxda ee dhaqanka waxaa laga heli karaa Setu Babakan, tuulada dhaqanka Betawi (iyo kalluumeysiga balligiisa).
Shineemooyinka waa baxsi aad u jaban oo kudhowaad Rp30,000 - 45,000 oo loogu talagalay kursiga dheeriga ah (Rp40,000 - 70,000 dhamaadka usbuuca, illaa Rp150,000 haddii aad daawato Fasalka Premiere ee XXI ama Fasalka Velvet ee CGV Blitz) mid kamida xarumaha laga dukaameysto ee caasimada. Iska jir gacanta culus ee faafreebka Indooniisiya inkasta oo. Qiimaha saloolka iyo cabitaanku waa mid xad dhaaf ah sidaa darteed waxaad jeceshahay inaad soo qaadato imaatinkaaga. Cineemooyinka CGV Blitz ayaa sida caadiga ah soo bandhigi doona filimo ku baxa luqad shisheeye oo aan ka aheyn Ingiriisiga, kuwa yar yarna waxay sidoo kale soo bandhigayaan B-Filimyada Indooniisiya oo leh mowduucyo kacsi leh ). Silsiladaha ugu badan ee shineemooyinka ee Indonesia waa 21 Cineplex (oo lagu calaamadeeyay inay yihiin XXI xarumaha waaweyn ee laga dukaameysto) iyo CGV Blitz . Masraxyada IMAX waxaa laga heli karaa oo keliya tiyaatarka magaalada Gandaria ee XXI, tiyaatarka Mal Kelapa Gading III iyo Keong Mas ee TMII, in kasta oo kan dambe uu inta badan muujiyo dokumenti ahaan marka loo eego filimada xaragada badan.
Jakarta waxay ku faantaa qaar ka mid ah dhacdooyinka muusikada ugu weyn adduunka, taas oo laga yaabo inaad la yaabto, taageerayaasha da'da yarna waxay soo jiiteen farshaxanno adduunka oo dhan inay si joogto ah u joojiyaan Jakarta oo qayb ka ah socdaalkooda adduunka, laga soo bilaabo riwaayadaha dhagxaanta ilaa pop-ka Korea. Malaha dhacdada ugu caansan ee la yaqaan waa sanadle Jakarta International Jazz Festival Taasi waxay dhacdaa Maarso kasta 3 maalmood, oo ay ka buuxaan in ka badan 40 farshaxanno caalami ah iyo kuwa maxalli ah oo qaadaya jazz, R&B iyo heeso reggae ah. The Hammersonic waa xaflad muusig bir ah oo sanadle ah, halka Waxaan Fest The waxay ku faantaa qaar ka mid ah bandhigyada farshaxanada indie / pop bishii Ogosto tan iyo markii ugu horreysay ee la aasaasay 2014, Wadada Soundrenaline wuxuu kuu kaxeeyaa bandhigyada caanka ah ee maxalliga ah ee 'indie / waaweyn', ka hor intaanay ku dhammaan Bali dhacdada ugu weyn oo ay la socdaan qaar ka mid ah farshaxanno caalami ah oo halkaas ku soo bandhigaya iyo Mashruuca Bakhaarka Djakarta waxay martigelisaa DJ-yada caanka ah adduunka si ay u camiraan bilowga fasaxa sanadka dhammaadka ah. Waxqabadka dariiqa, Sudirman-Thamrin strip wuxuu xiraa habeenkii 22 Juunyo iyo Sannadka Cusub, markii marxaladaha bandhig faneedyada la taago iyo bandhigyo dhaqameed lagu dejiyo sanadguuradii aasaasida Jakarta iyo Sannadka Cusub, siday u kala horreeyaan.
Qaar ka mid ah alaab dhaqameedyada iyo kuwa caadiga ah, waxaa lagu soo bandhigaa bandhigyo Gedung Kesenian Jakarta, by indie, jazz, qoob ka ciyaarka, iyo orchestras muusig heer sare ah. Taman Ismaaciil Marzuki waxay qabataa inta badan riwaayadaha, in kasta oo bandhigyada Ingiriisigu ay dhif tahay. Hoolka Erasmus Huis safaaradda Nederland ayaa sidoo kale si joogto ah u martigelisa bandhigyada muusikada caadiga ah iyo bandhigyada sawir qaadista.
Goobta isboortiga ee Jakarta ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu firfircoon ee aad waligaa ku arki doontid Aasiya. Dhismaha isboortiga ee Senayan weli wuxuu ku nool yahay magaciisii ​​tan iyo ciyaarihii Aasiya ee 1962, halkaas oo fallaadhi iyo toogashada gudaha ay sidoo kale u furan tahay in la isku dayo Soemantri-Brodjonegoro ee degmada Kuningan sidoo kale waxay ku siisaa nashaadaadyo nashaadaadyo noocyo badan ah. Haddii aad jeceshahay skateboard, Kalijodo Skatepark is meesha ugu fiican ee lagula kulmo kuwa kale.
Jakarta ayaa laga yaabaa inay tahay magaalada ugu fiican ee lagu ciyaaro golf-ka Aasiya, iyada oo ay ugu wacan tahay koorsooyin fara badan oo u dhow ama xitaa bartamaha magaalada, iyo qiimo jaban marka loo eego heerarka Reer Galbeedka. Khidmadaha cagaaran waxay hoos ugu dhici karaan Rp70,000 maalmaha shaqada, inkasta oo koorsooyinka wanaagsan ay ka laba-jibbaaraan yihiin, isbuucyada dhammaadkooduna aad uga hooseeyaan Rp300,000 iyo ka badan. Koorsooyin badan oo golf-ka ah ayaa ku yaal Koonfurta iyo Bariga xaafadaha magaalada ugu dhow, aadna uga fiican tayo ahaan iyo tiro ahaanba magaalooyinka dayax-gacmeedka.
Indooniisiya waa mid ka mid ah wadamada nasiibka u yeeshay dalal ka tirsan qaarada Aasiya halkaasoo kooxo badan oo yurub ah oo kubbadda cagta ah, oo ay ku jiraan kuwa caanka ah ee Premier League ama Horyaalka Talyaaniga, ay ciyaar tijaabo ah la ciyaaraan xulka qaranka marka ciyaarta lafteeda ay ka dhacdo Yurub Taageerayaashii udhaxeeyey xulka qaranka iyo reer yurub ee Garoonka Gelora Bung Karno xitaa waa, inkasta oo qaybta ugu badan ee xulka qaranka Indonesia ay khasaaro soo gaarto, iska horimaadyadu uma muuqdaan inay ugu yaraan ku dhacayaan qaab fowdo ah. Markay yurubiyanku soo laabtaan xilliyadii, maqaaxiyo badan iyo baarar ku yaal agagaarka magaalada ayaa dhigay shaashadaha telefishanka ee waawayn si ay xamaasaddu u qarxdo markay cabayaan waaberiga.
Futsal waa nooca gudaha ee kubada cagta, kaasoo koox kasta ka heysta 5 ciyaartoy iyo xeerar badan oo dabacsan oo ciyaarta ah. Markasta oo shaqada la shaqeeyo ama dhamaadka usbuuca, waxaad si sahal ah uga heli kartaa dad fara badan maxkamadaha gudaha ee magaalada oo dhan. Bannaanka, wasakhda iyo meelaha cawsku ka samaysan yahay ayaa ku badan aagagga la deggan yahay, oo ay ku badan yihiin ciyaartoy, daawadayaal iyo iibiyeyaal, caadi ahaan galabtii dhammaadka usbuuca. Ciyaarahaan aan caadiga ahayn, qof kastaa wuxuu si fudud u weydiisan karaa inuu ku boodo ama ku nasto.
Maaddaama ay tahay awoodda badminton, Jakarta waxay leedahay maxkamado badan oo badminton ah, oo ka bilaabma goobaha qaran ee ku yaal Dhismaha Senayan ilaa hoolalka hareeraha ku yaal ee loogu talagalay futsal iyo badminton labadaba. Intooda badani waxay leeyihiin sagxad-guddi ah oo alwaax lagu xajiyo oo xaaladdooda si macquul ah oo wanaagsan loo ilaaliyo. Laydhku si adag ayuu u shaqeeyaa waana ka hooseeyaa heerkiisa marka la barbardhigo hoolalka badminton ee caadiga ah. Dadku waxay ciyaaraan fiid kasta - sidaas darteed, u soco, la hadal wadahadal kabtanka kooxda, waxayna filayaan inay ku dhex milmaan kooxdooda kulanka. Haddii kabtanka uu diido bixinta (badanaa ka yar Rp20,000), waa edeb in la iibsado ciyaartoyda wareega cabitaannada fudud (teh-botol waa xulasho wanaagsan). Ka digtoonow inay caadi tahay dadka reer Indonesia inay wax cunaan, sigaar cabaan, wax cabbaan oo seexdaan maxkamadda dhinaceeda: markaa fiiri cagahaaga.
Haddii aad rabto inaad daawato halkii aad ka ciyaari lahayd, the Istora Senayan waxaa la soo buuxiyaa horraantii Juun inta lagu jiro Indooniisiya Furan, marka Indonesia iyo kuwa adduunka ugu sarreeya ee badminton tartamaan. Farxadda dhagaha la 'ayaa lagu heesayaa xitaa wixii ka dambeeya markii ay ciyaartoydu garaacaan shuttlecock, oo ah xamaasad aan laga helin meelo kale oo adduunka ah. Waxaa lagula talinayaa inaad tikidhada ku iibsato khadka tooska ah (gaar ahaan semifinal-ka iyo kulamada ugu dambeeya), haddii kale waa inaad kala doorataa inta u dhexeysa daawashada telefishanka ama shaashadda weyn ee Istora (ka fikir Murray Mound / Henman Hill ee Wimbledon).
Waxaad ku jirtaa mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Aasiya — karaoke waa wax iska caadi ah, markaa qalbigaaga ka gabya! Inta badan noocyada silsiladda sida Inul vizta, NAV, ama DIVA waxaa laga heli karaa suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto ee ay ku ciyaaraan dhalinyarada. Waxaad heli doontaa qol kuu gaar ah oo leh maktabado ballaadhan oo ay ku jiraan heesaha maxalliga ah, Ingiriisiga, iyo heesaha Bariga Aasiya, oo ka socda TV-ga shaashadda ballaadhan leh intaad dalban karto cabbitaan ama cunto lagu raaxaysto intaad sugayso wakhtigaaga oo gabyaya. Qiimayaashu waxay ka bilaaban karaan ugu yaraan Rp70,000 qolkiiba ugu yaraan 6 qof.
Fasallada karinta waxaa la qabtaa Axadaha 10 AM subaxnimo 99 Ranch Market laanteeda Pondok Indah ee Rp200,000. Waxa kale oo jira dhowr goobood oo ku teedsan Jalan Kemang oo si gaar ah loogu talagalay ajaanibta. Badankood waxay bixiyaan fasalo karinta keega.
Si xiiso leh, waxaad wax uga baran kartaa dhaqamada adduunka oo idil ee Jakarta. Safaarado badan ayaa sameeyay xarumo dhaqan oo aad ka qaadan karto fasalada dhaqanka & luqadaha aduunka. Ka hubi xarumahan dhaqan wixii macluumaad ah: Xarunta Dhaqanka Kuuriya, Machadka Francais, Istituto Italiano di Cultura, Aasaaska Japan, Xarunta Dhaqanka Ruushka, Goethe Institut.
Shaqada caadiga ah ee Jakarta way adagtahay in la helo isla markaana xafiiska shaqada ee Indooniisiya si fudud kuma fududeeyo ajaaniibta ka shaqeysa Indonesia. Sida Aasiya inteeda kale, barashada Ingiriisiga ayaa ah ikhtiyaarka ugufiican, inkasta oo mushaharku liito (US $ 700-3000 / bishii waa iska caadi, in kastoo hoy la siin karo) dowladuna waxay u ogoshahay kaliya muwaadiniinta UK, Australia, New Zealand, Canada iyo USA inay macallimiin ahaan u shaqeeyaan. Fiisooyin shaqo oo rasmi ah, rukhsadaha deganaanshaha iyo diiwaangelinta dhowr xafiis oo dawladda ah ayaa lagama maarmaan ah. Oggolaansho rasmi ah oo ka socota Waaxda Shaqaalaha iyo bixinta dukumiintiyo iyo dammaanad qaadis kafaala qaade ayaa looga baahan yahay inuu ku biiro nooc kasta oo shaqo ah Jakarta ama meel kale oo Indonesia ah. Fiisooyinka ganacsiga ayaa loo heli karaa ujeedooyinka lagu qabanayo howlaha la xiriira ganacsiga ee Jakarta ama meelo kale oo Indonesia ka mid ah, fiisadan fasalka ah waxay leedahay shuruudo adag waxayna u baahan tahay ganacsi maxalli ah inuu kafaalo qaado codsadaha. Fiisaha ganacsiga uma ogolaanayo qofka heysta inuu sameeyo nooc shaqo oo shaqo ah.
Grand Indonesia Shopping Town oo ku taal Bartamaha Jakarta, sida laga daawaday Plaza Indonesia
In ka badan 2.5 milyan oo dalxiisayaal ajnabi ah iyo in ka badan 30 milyan oo dalxiisayaal gudaha ah ayaa booqda Jakarta sannad kasta. Waa janno lagu iibsado dharka calaamadaha caalamiga ah (run iyo beenba).
Haddii aad joogsaneyso Jakarta, tixgeli inaad iibsato shandad dheeri ah, maxaa yeelay way jiraan dukaamo badan oo wanaagsan fursadaha. Shandado wanaagsan oo la isticmaalay ayaa laga iibsan karaa wadada Surabaya waxayna waratada sidoo kale iibiyaan waxyaabo qadiim ah. Si kastaba ha noqotee, ogow in kastoo tayada ay noqon karto mid aad u fiican, alaabada saxda ah ee saxda ah ama alaab tayo leh ayaa qaali ah.
Sannad kasta, Dowladda Gobolka Jakarta waxay qabataa sanadle Festifaal Jakarta Iib Weyn taasi waxay dhacdaa Bisha-Juun illaa Badhtamaha-Julaay. Suuqyada badankood, suuqyada laga dukaameysto, iyo dukaamada waaweyn ayaa ka soo qeyb gala oo qiimo dhimis ku sameyn doona waxyaabaha la xushay, in kasta oo dhacdada lafteeda laga yaabo in si dirqi ah lagu arki karo marka laga reebo calammo qaarkood. Dukaamada qaarkood sidoo kale waxay shaqeeyaan Iibka Habeenkii, badiyaa dhammaadka usbuuca. Inta badan suuqyadu waxay furan yihiin laga bilaabo 10: 00-20: 00 maalin kasta, marka laga reebo Maalinta Ciidda oo ay furan yihiin 13: 30-22: 00.
In kasta oo saboolnimada ba'an lagu soo bandhigay qaybo ka mid ah magaalada — inta badanna ay ka mid yihiin shaqaalaha soogalootiga ah ee aan aqoonta lahayn ee ka yimid magaalooyinka kale - Sannadkii 2017, Jakarta waxay leedahay in ka badan 170 weyn, oo dhalaalaya suuqyada (oo ay ku jiraan xarumaha ganacsiga iyo xarumaha cuntada) in ka badan laba laab 70 jeer shan sano ka hor, in ka badan magaalooyinka kale ee adduunka, iyo in ka badan inta aad ka filaneyso inaad tahay qof cusub. Xusuusnow in badeecadaha dhabta ah ee laga soo dhoofiyo wakiilada kaliya, sicirka la xakameynayo inuu isku mid yahay adduunka oo dhan, sidaas darteed dalxiisayaasha gudaha uma baahna inay raadiyaan gorgortan dibedda ah, halka qaar ka mid ah dalxiisayaasha ajnabiga ah ay dhab ahaantii doorbidaan inay ka dukaameystaan ​​Jakarta si ay u helaan fursado badan oo naqshadeyn ah. Inta badan suuqyada wax lagu iibiyo waxay ku yaalliin midba midka kale, marka haddii aadan awoodin inaad hesho waxaad u baahan tahay, ka tag albaabka xiga.
Qaar ka mid ah dhismooyinka ganacsiga ee ugu caansan ayaa ku yaal bartamaha magaalada. Grand Indonisiya iyo Plaza Indonesia waa laba xarumood oo heer sare ah oo isku xiga Jakarta mashquulkeeda Hotel Indonesia Roundabout. Plaza Senayan & Senayan City sidoo kale waa isdhaafsanayaan labadoodaba waa xasaasi. Mal Taman Anggrek iyo dhexe Park at Jalan Letjen S. Parman waxaa loogu talagalay dhammaan wareegayaasha.
Jalan Prof.Dr.Satrio waa jawaabta Jakarta ee Waddada caanka ah ee Orchard ee Singapore, Tokyo / Ginza ee Tokyo iyo Fifth Avenue ee New York. Afar xarumood (oo kala ah ITC Mal Ambassador, Kuningan City, Ciputra World I, iyo xoogaa ka sii fog, Kota Kasablanka) iyo tirinta, oo loogu talagalay martida dhammaan heerarka miisaaniyadda. Qumbaha Maroodiga waxay leedahay waddo leh afar xarumood dhinaceeda, laba kale oo waaweyn oo waaweyn ayaa ku yaal meelo kale oo gobolka ka mid ah. Xakamaynta iyo Pondok Indah waxay martigalisaa seddex carwo oo kuyaala hal wado.
Xarun kasta oo laga dukaameysto waxay leedahay ugu yaraan hal dukaan oo waaweyn, oo ay weheliyaan noocyo leh dukaamo u gaar ah. Sogo waxay leedahay laamaha ugu badan, waxaana ku xiga Metro & Centro. Galeries Lafayette waxaa laga heli karaa Pacific Place halka Seibu iyo Central ay ku yaalliin Grand Indonesia. Cadceed sidoo kale waxay bixisaa moodel isku mid ah badanaa qiimo jaban.
Marka lagu daro suuqyada waaweyn, sidoo kale waxaa jira tiro aad u tiro badan oo aad u ballaaran Xarumaha wax iibsiga, badankood waxay ku dhexjiraan dhisme adag, markaa haddii aadan awoodin inaad ka hesho waxa aad uga baahan tahay hal suuq, waxaad mar kale isku dayi kartaa suuqa ku yaal albaabka xiga. Mangga Dua, Tanah Abang, Iyo Pasar Baru waa meelaha ugu fiican Jakarta si loogu dukaameysto moodada. Aagga Mangga Dua waxaa ku yaal ugu yaraan 3 xarumood oo wax laga iibsado oo ay ku xiran yihiin buundooyin: ITC waxaa loogu talagalay moodada dabaqadda dhexe iyo sare, halka fasalka hoose loo adeego Pasar Pagi Mangga Dua, Iyo Mangga Dua Mall waxaa loogu talo galay dadka wax soo jiidaya qalabka. Tanah Abang waa suuq jumladle ah isla markaana ugu weyn koonfur-bari Aasiya, iyadoo la geeyo Afrika iyo qaybaha kale ee adduunka. Tanah Abang waa camiran tahay, sidaa darteed magaalada Thamrin ee ku xigta Grand Indonesia (500 m u jirta Tanah Abang) waxay u adeegi kartaa bedel ahaan, badanaa dharka muslimiinta iyo baatiga. Pasar Baru maahan xarun wax laga iibsado, laakiin waxay u egtahay waddo leh dukaamo tafaariiq duug ah; shaambadayaasha aruuriya waxay awoodi doonaan inay ka helaan shaambadaha Indonesia horteeda dukaamadaan badankood. Fagaaraha Mangga Dua, iyo sidoo kale Glodok iyo Roxy, waa goobo laga helo aalado. WTC (Xarunta Ganacsiga Jumlada) Mangga Dua ayaa hadda ku takhasustay iibinta baabuurta la isticmaalay, iyadoo in ka badan 100 la iibiyo maalintii.
Haddii aad raadineyso alaab dhaqameed sida farshaxan gacmeedyada maxalliga ah, batik dhaqameedka Indooniisiya ama wayang golek (puanyooyinka Sundanese), waxaad aadi kartaa Jalan Surabaya Bartamaha Jakarta. Haddii aad raadineyso khariidado naadir ah, daabacado ama sawir gacmeedyo, waxaad aadi kartaa Kemang Raya, halkaas oo ay ku yaalliin qolal badan oo ay ka mid yihiin Bartele gallery iyo Hadi Prana. Pasaraya Grande dukaanka laga dukaameysto ee Blok M, South Jakarta wuxuu leeyahay hal dabaq oo loogu talo galay qadiimiga Indonesia iyo farsamada gacanta. Pasar Seni Ancol waa Xarunta Rinjiyeynta iyo Farshaxanka, oo ay ku jiraan sawirro sawirro ah oo aad goobta ku samayn kartid. Sarinah bakhaarka weyn ayaa sidoo kale leh qayb ballaaran oo hadiyado dhaqameed ah.
Ka adeegashada suuqyada dhaqameed sidoo kale waxay noqon kartaa waayo-aragnimo xiiso leh, halkaas oo aad ka heli karto miraha kulaylaha qalaad, cunnooyinka fudud ee caadiga ah, moodooyinka jaban iyo waxyaabaha cusub Halka badankood ay ka fogyihiin meelaha dalxiiska kulul, Pasar Gondangdia guud ahaan saldhiga tareenka ee magacyada leh iyo Suuqa Cusub Pantai Indah Kapuk waa meelaha wali ku bixiya khibrada noocaas ah dhisme casri ah iyadoo si fudud loo heli karo.
Lacagta caddaanka ah ayaa weli ah nidaamka lacag-bixinta ugu wax ku oolka badan ee macaamilada oo dhan. Dukaamo yar oo la aasaasay ayaa aqbali kara lacag bixinta kaarka deynta / kaarka deynta iyo lacagta elektaroonigga ah.
Deganaanshaha Allson Hotel Jakarta
Hotel Aston Cengkareng City & Xarunta Shirarka Jakarta
Hotel Aston Marina & Hoyga Jakarta
Hotel Aston Pluit & Degenaansho
Deganaanshaha Aston Rasuna Jakarta
Hoteelka Galbeedka Mangga Dua ee ugu wanaagsan & Deganaanshaha
Huteelka Ciputra Jakarta
Isgoyska Favehotel Pluit
Afarta xilli ee Jakarta
Degenaanshaha Fraser Jakarta
Hoteelka Hoteelka Cempaka Sunter
Hoteelka Indonesia Kempinski Jakarta
Hoteelka Santika Premiere Jakarta
Keraton At The Plaza A Collection Raaxo Hotel Jakarta
Lumire Hotel & Xarunta Shirarka Jakarta
Deganaanshaha Puri Casablanca Jakarta
Hoteelka Akmani Jakarta
Hotelka Dharmawangsa Jakarta
Mayflower Jakarta - Guryaha Maamulka ee Marriott
Hotelka Warbaahinta & Towers Jakarta
Hoteelka Park Lane Jakarta
Huteelka Ritz Carlton Jakarta - Mega Kuningan
Huteelka Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place
Hotelka Sultan ee Jakarta
Socotada Hotel Jakarta
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaasha ee Indonesia > Tilmaamaha Safarka Jakarta Xalaal
Hagaha Socdaalka Xalaal ee Dresden